Qeybdiid "Intaan buunka nagu dhicin, shacabka aan maqashiinno…'' – Bandhiga
Qeybdiid "Intaan buunka nagu dhicin, shacabka aan maqashiinno…''
Guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u habaynta dastuurka KMG ee dalka mudane Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid), ayaa maanta fadhiga wadajirka ah oo ay yeesheen labada gole ee dowladda federaalka ka jeediyay khudbad ku saabsan hannaanka loo marayo dib u saxidda dastuurka KMG ah.
Mudanaha ayaa sharraxaad ka bixiyay qaabka habraac ee loo marayo dib u habaynta dastuurka iyo shaqooyinka guddigooda u qabsoomay illaa iminka.
Cabdi Qeybdiid ayaa soo jeediyay in shacabka Soomaaliyeed aan la niyad-jabin, islamarkaana inta waqtigu idlaanin howlaha dastuurka ay xogtiisa helaan.
“Waxaan Gudoonka Baarlamaanka usoo jeedinayaa inta aan buunka nagu dhicin shacabka Soomaaliyeedna aan maqashiinayaa in aan la xirin kala fadhiga Lixaad ilaa shacabiga Soomaaliyeed Dastuur uu waafaqasanyahay loo ansixiyo” ayuuu yiri Cabdi Qeybdiid.
Guddoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka labadiisa aqal Cabdi Qeybdiid ayaa intaas raaciyay hadalkiisa;
“Hadii kale maalin walbo waxaan ku jireynaa Doorasho dadban, Doorasha jiifta, doorasha istaagan, mid tuur leh, mid qalloocan, mid fadhid” Guddoomiyaha Guddiga Dastuurka Labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qeybdiid).
Hadalkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo dastuurka uu asal u yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho cod iyo qof ah inkastoo guddiga doorashada madaxabannaan oo ay hoggaamiso Marwo Xaliima Yareey ay ku adkeysanayaan in dalka ay doorasho ceynkaasi ah ka qabtaan.